Wasiiru Dowlaha Warfaafinta Puntland oo Dood-cilmiyeed Ku Saabsan Soomaaliya Ku Qabtay Dalka Sudan[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasiiru Dowlaha Warfaafinta Puntland oo Dood-cilmiyeed Ku Saabsan Soomaaliya Ku Qabtay Dalka Sudan[Sawirro]
KHARTUUM – Dood-Cilmiyeed ay soo qaban qaabisay xarunta “Rakaa’isu Al-macrifa” ee ka mid ah xarumaha talada siiya xukuumadda dalka Suudan ayaa waxaa warqad-cilmiyeed ka jeediyay Xaruntaas Wasiiru dowlaha wasaaradda Warfaafinta, Isgaarsiinta, hiddaha iyo dhaqanka dowladda Puntland. Dr. Cabdifataax Nuur Ashir.
Dood ciliyeedka waxaa ka soo qayb-galay Wasiiro, danjirayaal, aqoonyahanno ka kala socday jaamacadaha Suudan iyo sidoo kale bahda Saxaafadda iyo daneeyayaasha arimaha Soomaaliya.
Dood-cilmiyeedkaas ayaa cinwaankeedu ahaa: “Xaaladda Soomaaliya iyo saamaynta ay ku yeelan karto geeska Africa”.
Ugu horrayntii, waxaa ka soo qayb-golayaasha doodda si rasmi u soo dhaweeyay Agaasimaha macahadka “Rakaa’isu Al-Macrifa” Ustaad Cabbaas Haaruun oo sheegay in xaruntoodu ay marti-galisay dhammaan ka soo qayb-galayaasha, dooddaana loogu talo galay in diiradda lagu saaro xaaladda Soomaaliya.
Cabbaas wuxuu kaloo sheegay in maalmo ka hor ay marti-galiyeen Wasiiru dowlaha ganacsiga dalka Shiinaha oo isaguna ka warbixiyay heerka is-dhaafsiga ganacsi ee Suudan iyo Shiinaha oo heerar kala duwan soo maray. khudbadda Agaasimaha Macahadka ka dib,waxaa si toos ah loogu soo dhaweeyay Dr.Cabdifitaax Nuur Ashkir.
Wasiiru Dowlaha Warfaafinta Puntland Dr. Cabdifitaax Ashir ayaa khudbadiisa diirada ku saarey xaaladda Soomaaliya ay marayso, sida siyaasadda iyo istraatiijiyadda,
…Soomaaliya maanta waxay maraysa xaalad aad u cakiran, goloyaashii dowladda ayaa isku khilaafsan maamulka iyo maaraynta dalka;waxaa muuqda ififaale keeni kara in dalku dib ugu noqdo sanado hore eelaga soo gudbey sidii uu ahaa…. ayuu yiri Wasiir Dr. Ashkir.
Wasiir Ashkir ayaa sheegay in Soomaaliya iminka ay ku hardamayaan garbo shisheey, qaarkood gacanka carbeed ay ka soo jeedaan, dowladduna ay la kala safantahay garbahaas. Wasiirka ayaa muujiyay in waxa hadda socda ay tahay “Tilaabo golaha fulinta uu ku doonayo in uu marin-habaabiyo hab-sami-u-socodka golaha shacabka Soomaaliyeed”.
Wasiir Ashkir ayaa kalmadiisii ku sòo gunaanaday talooyin uu u jeediyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, waxaana uu yiri:
….Waxaan madaxweynaha talo ugu soo jeedinaynaa in uusan koox isku koobin,dalku waa ka weenyahay koox yar ee mudane Madaxweyne si dalka loo samatabixiyo waxaa loo baahanyahay in aad talo-wadaag ku hagto dalka”.
Sidoo kale waxaa dood-cilmiyeedka ka hadley Dr.C.Wahaab Al-Dayib Al-Bashiir oo ah khabiir geeska Africa ka faalooda,kana tirsan Xarunta Cilmi-baarista ee jaamacadda “Africa international University” Khabiirkan ayaa xoojiyey doodii Dr. Ashir waxaana uu sheegay in waxa hadda ka socda Muqdishu ay saamayn amni ku yeelan karto gobolka geeska Africa, waayo waxa soo ifbaxay dhawaanahaan awooddii ururka Al-Shabaab oo ka faa’iidaysanaya Amniga oo faraha ka sii baxaya.
Ka soo qayb galayaashii ayaa Wasiirka Su’aalo Soomaaliya ku saabsan weeydiiyay, iyagoo ra’iyigoodiina ka dhiibtay waxa dalka ka socda.
Waxaa Xusid mudan in dood-cilmiyeedkaan lagu qabtay Khartuum ay dhinac ka ahaayeen dhalinyaro la magac baxday “Ruwaad Al-Wacyi” oo ah baraarug dhalinyaro isku hawsha qabashada dood-cilmiyeedyo looga arinsanayo arimah dhaqanka iyo siyaasadda.